↑ Kyaw Kyaw Htun and Win Lwin. "Myanmar Country Report". ASEAN Mass Communication Studies and Research Center. Retrieved on 2008-12-24.
↑ Thant Myint-U (2006). The River of Lost Footsteps--Histories of Burma. Farrar, Straus and Giroux, 371. ISBN 978-0-374-16342-6။
↑ ၃.၀ ၃.၁ MRTV Transmission။ MRTV။ ၂၀၁၄-၁၀-၂၀ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ About MRTV။ ၂၀၁၄-၁၀-၂၀ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=မြန်မာ့အသံနှင့်ရုပ်မြင်သံကြား&oldid=508211" မှ ရယူရန်
၂၉ မတ် ၂၀၂၀၊ ၀၁:၄၉ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၂၉ မတ် ၂၀၂၀၊ ၀၁:၄၉ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။